“Inona no laokan’ielahy ?” “Aombe” - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Notrongisin’ny Minisitry Ramparany Anthelme ny labatoara roa an’ireo Sinoa. Izay no kisary tonga ao antsaina manoloana ny fanapahana noraisin’ity nandimby toerana an’i Joseph Martin Randriamampionona na i Dadafara eo amin’ny fitantanana ny Minisiteran’ny Fiompiana.
Io kisary io no tonga an-tsaina ary heverina fa mifanaraka rahateo amin’ny toetran’ity minisitra ity izany. Tsaroana etoana ny hafatry napetrany ho an’ny nandimby azy eo amin’ny Ministeran’ny tontolo iainana. “Vangoy” hoy Ramparany nametraka hafatra ho an’ny mpandimby toerana azy ary mbola nampiany hoe “atao ady farimbona raha ilaina izany”.
Io kisary fitrongisana io no tonga an-tsaina manoloana ny fahafantarana fa ny fampiatoana ireo labatoara roa an’ireo sinoa no fanapahana voalohany noraisin’Ingahy Minisitra. Labatoara any Toliara ny iray ary ao Vontovorona ny iray hafa. Marihina kosa fa fampiatoana ny asana mandritra ny 60 andro raha be indrindra fa tsy fanakatonana tanteraka akory no fanapahana noraisiny.
Manoloana an’ity fampiatoana ity dia hevitra maromaro no mifamahofaho ao an-tsaina. Ny iray amin’ireny hevitra ireny dia ny hoe ity valifaty ve izao fanapahana noraisina izao ? Valifaty satria nahery ny teny fanaovam-beloma napetrak’i Dadafara nandritra ny fifamindram-pahefana. “Tsy misy ny ministra hahavita tsara noho izay vitako teto” hoy tokoa i Dadafara tamin’io famindram-pahefana io. Tsapa amin’izany tokoa ny alahelon’i Dadafara sy tafaverina amin’ny toerany. “Sady alahelon-kanina no alahelon-tseza izany” hoy ny mpanatsafa. Ao koa anefa no mahita fa voatsindrona ny hambom-pon’ny mpandimby toerana taorian’izany fitenenana imaso somary henjana izany. Izay no nahatonga ny fanapahana voalohany ka lasa famonoana izay dian-tanan’i Dadafara no laharam-pahamehana araka ny fijerin’ny mpitazana. Fa angaha tsy ao anatin’ny dosie niampita ny momba ireo labatoara ireo ? Angaha tsy mpiasan’ny Minisitera no nanao ny asa ? Mahagaga ihany koa satria olona niaraka nandray fanapahana teo anivon’ny filankevitry ny goverinemanta ry zareo satria samy minisitra tao anatin’ny goverinemanta iray izy ireo tamin’ny fotoan’androny.
Endrika ivelany amina trangan-javatra iray izany. Ny tsara marihina dia mahakasika aim-pirenena raha vao resaka omby. Tsy misy raharaham-pianakaviana tontosa raha tsisy aombe raha any Atsimo manokana no raisina. Na lanonana an-kasoavana izany na adidy an-karatsiana. Ny omby no ampiasaina rehefa misy famitram-pihavanana tontosaina. Manoloana izany toerana nomena ny omby izany eo amin’ny fiaraha-monina dia rariny raha sarom-piaro amin’ny fikajiana ny omby ny Minisitra. Fantatra tokoa fa ny Sinoa dia mety kely maso no anaram-petaka fiantsoana azy fa be fandroaka ry zareo rehefa miasa. Tsaroana manokana amin’izany ny ozinina iray fandrendrehana vy teny Ambohimanambola. Nila vy aman-taonina ry zareo Sinoa nanangana ilay ozinina ka nampirongatra ny halatra vy teny anivon’ny fiaraha-monina izany. Voatery nakatona izany ozinina izany satria nampidi-doza. Aiza ka ny arofanina amin’ny tetezana ary indraindray aza ny tetezana mihitsy no nisy nangalatra… ! Dia raha tsy mitandrina isika dia ho ringana ny omby raha hiverenana ity resaka labatoara ity. Tsena ho an’ny Siona amin’ny mponina lavitrisa anie no vatsiana e…
Ny tsara marihina dia tsy mitsaha-miakatra ny vidin’ny kilaon’ny hen’omby eny amin’ny tsena. Tsy fantatra mazava ny mahatonga izany sy ny mety ho dikany. Mitory ve izany fa mihena ny isan’ny omby eto Madagasikara ? Sa manararaotra ny mpivarotra hen’omby satria toa zary mitombo isa ireo tsy mihinan-kisoa (mpiangona amina sekta…). Izany hoe ny mpihinana mitombo fa ny tolotra tsy mihetsika na mihena mihitsy aza.
Marihina koa fa ny fiarahana amin’ny Sinoa dia safidy manahirana. Io izao ny tranga farany dia ny nahitan’ny Minisitra Maharante Jean de Dieu ozinina tantanan’ny Sinoa ka henjana ny fitondrany ny mpiasa ao. Toa gadralava sy fanandevozana no hita ao. Tahaka izany tokoa ny fitondrany ny mpiasa any aminy fa tsy eto Madagasikara irery. Tahaka izany koa ny ataon’ireo Siona ireo any amin’ireny Chinatown ireny na any Parisy na any an-kafa. Indrindra rehefa goragora ny mpitondra na minia mikimpy mihitsy. Resaka mivoana amin’ity resaka aombe ity izany. Resaka tsara tohizana kosa anefa.
Ndeha hiverenana kely ny resaka aombe. Tsy vao izao akory no mahabe resaka ity omby ity. Nisy fotoana ny fisian’ny dahalo tahaka an-dry Remenabila no nampalaza ny resaka omby. Voalaza tamin’izany fotoana izany fa misy manondrana velona any ivelany ny omby. Isan’ny tena mampimenomenona ny mpandraharaha sasany izany satria rehefa haondrana velona any ivelany dia lasan’ny olona manontolo izay harena mety ho azo amin’ny omby : tandroka fanaovana ranomena na akora ho an’ny mpiasatanana, ny hoditra sy ny sisa… Sahirana mihitsy ny Randriamandranto momba ity resaka omby ity. Nanome lalana izy mba ho azo haondrana ny omby. Niaka-pofona ny olona.
Raha izao famonoana omby amin’ireo labatoara natsangan’ireo sinoa ireo dia ho ringana vetivety ny omby eto ka zary fahatsiarovana sisa ny hira : Inona ny laokan’ielahy ary valiana hoe aombe. Hira fanaon’ireo zazavao entina manao hazakazaka manerana ny tanana mba ho hitan’ny olona. Tsiahy sisa ny famonoana omby rehefa famitram-pihavanana na ny resaka tolon'omby. Mifohaza ianao ry mpiompy.